Archive du 31-janv-2022
Paolo Raholinarivo “Manimba ny Filoha ireo be afera manodidina azy”
Nanao horonan-tsary manokana mikasika an’i Mahery Lanto Manandafy i Paolo Raholinarivo izay mpiasam-panjakana ambony omaly alahady.
Tena tsy hatahotra ny masony ?
Ny valanaretina mbola tsy resy fa mandravarava hatrany, mbola ady mafy ny fiatrehana sy fanarenana ny fiantraikan’ny loza voajanahary, ny vidim-piainana midangana,…
Ahiana handravarava Ho avy amin’ity herinandro ity ny rivodoza Batsirai
Tombanana hisy fiantraikany ho an’ny tapany antsinanan’i Madagasikara manomboka ny alarobia 03 janoary 2022 izao ny rivodoza batsirai.
Sakoroka be teny Ambatofotsy Fiara Peugeot 405 tratra nanary fatin’olona
Nisy toe-javatra hafahafa niseho teny Ambatofotsy amin’iny làlam-pirenena faha-7 iny omaly alahady 30 janoary 2022 tokony ho tamin’ny 4ora sy sasany.
Sidina mampiahiahy Niverina ilay fiaramanidina saika ho atsy Kaomoro
Fiaramanidina iray an’ny kaompaniana mpandraharaha matanjaka iray eto amin’ny firenena no nigadona tao Mahajanga omaly tolakandro tamin’ny 1ora sy 22 minitra.
Behoririka Novonoin'ireo mpiasa ilay Sinoa
Mpiasa 3 mianadahy amin’ny toeram-pivarotana ana tera-tany Sinoa iray etsy Behoririka no nahavita namono nahafaty ny mpampiasa azy ny sabotsy 22 Janoary lasa teo.
Mbola eo hatrany ny Coronavirus 211 no maty nandritra ny janoary
Tsy mety midina fa manodidina ny 50 mahery isam-bolana eo hatrany ny olona lavon’ny coronavirus nandritra ity volana janoary 2022 ity izay mifarana anio ity.
Fizarana vatsy tsinjo Ireo traboina manana karnem-pokontany no hahazo
Hanomboka anio alatsinainy ny fizarana ilay vary tsinjo fanomezana avy amin’ny Fitondram-panjakana ho an’ireo traboina.
Mahery Lanto Manandafy Hatolotra ny fampanoavana anio
Naharitra ora telo latsaka fahefany ny fakan’ny polisy misahana ny heloka an’habaka na ny « Cybercriminalité » an’i Mahery Lanto Manandafy na i Malama ny marainan’ny sabotsy 29 janoary lasa teo.
Tsena Miaka-bidy ny saribao sy legioma
Ho an’ity farany ohatra raha mividy ananana 1500 Ar ny tokantrano iray mahavita laoka hilaofana vary mandritra ny tontolo andro dia tsy ampy intsony izany amin’izao raha tsy 3000 Ar
Tolo-tànan’ny ho an’ny traboina Vary 1 taonina sy voamaina 500 kg ny Arema
Tonga nanatitra ny fitia tsy mba hetra ho fanampiana ireo Malagasy izay traboina noho ny fikaran’ny rano teny amin’ny Biraom-pirenena misahana ny loza sy ny tandindon-doza na ny BNRGC ny Antoko Arema ny sabotsy 29
Lalàna sy soatoavina Malagasy Tsara toerana hanome lesona ve ny TGV-MAPAR ?
Adihevitra mitana ny sain’ny maro amin’izao fotoana izao ny raharaha Mahery Lanto Manandafy, izay notorian’ny Fanjakana eny amin’ny Sampan-draharaha misahana ny heloka an’habaka na “Cybercriminatité”